Apple Mountain Lion Atụmatụ
Ihe kpatara Kọmịzụ Azụmaahịa Gị Ga - abụ Mac
Satọde, Ọgọstụ 25, 2012 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 26, 2012 Douglas Karr
Abụ m nwa nwoke na-anụ ọkụ n’obi kemgbe enyi m Bill zụtara m Apple TV. Tupu ịmara ya, enwere m ụlọ jupụtara na Macs na azụmaahịa m bụzi Macs niile. Na-abịa site na PC ụwa, enweela nsogbu ụfọdụ. Di na nwunye di na nwunye n’elu isi m… no macros na Office, no Microsoft Access. Nke ahụ bụ obere obere ndepụta. The uru nke a Mac na-atụgharị na-adị nnọọ ukwuu karịa ọghọm nke ịbụ a Mac na PC ụwa.
Site na ngwaike na ngwanrọ kachasị ọhụrụ, Apple na-ebugharị ụlọ ụfọdụ atụmatụ ndị dị egwu dị egwu maka azụmaahịa ọ bụla.
Nke mbụ bụ AirPlay. Na otu Apple TV maka $ 99 na igwe onyonyo ọ bụla, ụlọ ọrụ gị nwere ebe ị ga-eweta ihe na laptọọpụ gị n'enweghị nsogbu. Site na OSX nke kachasị ọhụrụ, Mountain Lion na-agbakwunye bọtịnụ airplay na ogwe menu. Pịa ya na ihuenyo gị gosipụtara. Nwere ike igwu vidiyo na ụda!
AirDrop na-esote… akụkụ nke Mountain Lion Wuru-Na ringkekọrịta. Anyị ahịa, Igbe ntinye, bịara site na dezie ụfọdụ faịlụ. Kama izipu ozi ma ọ bụ tinye na folda igwe ojii shared AirDrop nyere ya ohere iziga faịlụ ahụ na Mac m. AirDrop depụtara Mac niile na mpaghara gị ma nye gị ohere izipu ma nata faịlụ (yana ikike). Ihe di egwu!
Time Machine bụ mfe ndabere usoro ebi. Tinye a Oge Capsule na netwọk gị ma ọ bụ na ịkekọrịta otu ebe n'ebe ọ bụla… ma ị nwee ebe nchekwa maka Time Machine nke na-enweghị nkwado ndabere Mac.
Apple nwere mgbe ọ bụla nwere nnukwu ngwaọrụ iji nyere gị aka ịkwaga n'otu Mac gaa na-esote, mana Onye nyemaka Mbugharị dị mfe ma dị ịtụnanya! M zụtara ihe ọhụrụ MacBook Pro na nso nso a chọrọ iji nweta al m apps na faịlụ ya. Bido na bọtịnụ Nhọrọ ahụ pịa ma ọkachamara dị mfe na-ajụ gị ma ịchọrọ iweghachi site na Oge Igwe, tinyegharịa Mountain Lion ọhụrụ, ma ọ bụ detuo faịlụ na ngwa gị site na Mac ọzọ. N'ime otu awa m biliri ma na-agba ọsọ!
Buru n'uche na ọ nweghị nke njirimara netwọkụ a chọrọ n'ezie onye nchịkwa netwọkụ na nhazi ihe siri ike. Dị ka ọ bụla kachasị Apple na-arụpụta, ha na-arụ ọrụ.
Ọrụ ọhụrụ nke Chief Technology Technology Officer
Izochi Unsubscribe Gị abụghị Usoro Nzuzo
Aug 27, 2012 na 4:55 PM
Ma ozugbo ị “gaa Mac”, ị gaghị alaghachi azụ! 😉
Patrick Chen na Marketo
Aug 29, 2012 na 11: 34 AM
Excel… otu ihe mere onye ọ bụla na-eji nkà na ụzụ na-ere ahịa ga-eji PC, ọ bụghị Mac.
Sep 13, 2012 na 4:59 PM
Excel dị ka ọ na-agba nwayọ nwayọ na Macs okenye, mana ọ na-enwu ọkụ na MacBook Pro kachasị ọhụrụ. Ihe ọghọm bụ na VBA na Macros anaghị agba ọsọ na Mac (belụsọ na ị na-agba ya na Windows… nke ga - ekwe omume, mana merie ebumnuche inwe Mac!).
Sep 2, 2012 na 5: 14 AM
Excel na-agba ọsọ na Mac yana ọnụọgụgụ (nsụgharị Mac nke Excel). Nọmba WIth ị nwere ike ibupụ ma dezie Excel spreadsheets ma chekwaa ha na usoro kachasị. Mfe!
Sep 2, 2012 na 5:19 PM
Eziokwu @ twitter-15194414: disqus, mana ọ dị nwute na ụdị nke Excel na Mac anaghị etinye VBA (Visual Basic for Applications) ma ọ bụ Macros… nke ahụ bụ nnukwu ọdịiche na ọrụ!
Sep 13, 2012 na 5: 01 AM
Sistemụ nrụọrụ kọmputa kọmputa ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama o nwere ugbua. Awa di ịtụnanya na-eme mmemme ụbọchị atọ na mmemme.
Na ozi ndi ozo, igwe di na acha anụnụ anụnụ, mmiri bu mmiri.
Enwere m ibu Excel / dezie / chekwaa mpempe akwụkwọ dakọtara na 90s-spec PALM PILOT na mid-noughties Symbian dabeere na ekwentị maka ọmịiko.
Sep 13, 2012 na 4: 56 AM
Ehhh… ka anyi kwuo na ekwenyeghi m nke ukwuu ebe a.
Airdrop na-ada ụda mmụọ nke ọtụtụ dịka njirimara njirimara faịlụ nke ewuru na Microsoft Windows maka ihe karịrị afọ iri abụọ ugbu a, yana anyị na-ejikarị arụ ọrụ na Windows XP / 7 anyị. Enwere m nsogbu ịhụ ya dị ka USP maka Mac. Ọbụna ma ọ bụrụ na nke ahụ adịghị, ọ ga-adị mfe ịme otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na $ 10 bluetooth dongle tinye n'ime ọdụ ụgbọ USB na desktọọpụ, na atụmatụ BT wuru (na enweghị ederede) na laptọọpụ PC ọ bụla. (N'ezie, ọ bụ ihe m ji nnukwu ihe iji zipu faịlụ na site na ekwentị nke nwere Bluetooth ma ọ bụ njikọta USB na-adịghị mma, yana laptọọpụ na desktọọpụ nwere ngwa ọrụ dongle)… ma ọ bụ karịa ka dị mfe, na-eji sneakernetting na sub- $ 10 USB ebe nchekwa ma ọ bụ kaadị SD.
Airplay… OK, ọ bụghị ihe ọjọọ, mana ị ga-achọ onye nwe ụlọ ahụ ịnweta Apple TV ma jikọọ ya. O yikarịrị ka ọ gaghị esiri ya ike ime ya na PC / laptọọpụ ochie ọ bụla ejikọrọ na ntinye VGA nke HDTV gbakwunyere atụmatụ Desktọpụ Remkekọrịta Remote (nke wuru na Windows ebe ọ dịkarịa ala 2K, ma ọ bụrụ na ọ bụghị 9x) hụ na e nwere ọtụtụ HDTV banyere nke ahụ enweghị ma ọ bụ nwere ezigbo azụmaahịa PC (ma ọ bụ n'ezie Mac raara onwe ya nye) ejikọtara, ma ọ bụ igwe Windows arụnyere n'ime (n'ihe banyere mbadamba akara dijitalụ). Enwekwara ihe ngosi ikuku nke ikuku maka PC - n'eziokwu, ngwaọrụ ọ bụla na-ewepụta mgbaàmà VGA, RGB ma ọ bụ YCbCr hi-def (na n'ọnọdụ ụfọdụ HDMI / DVI, ma ọ bụ ihe mejupụtara) n'agbanyeghị ụdị, sistemụ arụmọrụ, ọkwọ ụgbọala ma ọ bụ ngwanrọ - maka ọ bụghị karịa ego. Modern Smart TVs nwere ike ịbụ na ha nwere ike ime ihe n'akụkụ ndị ahụ site na ethernet (ya mere wifi) kwa, mana n'oge a, agaghị m etinye ego na ya…
Oge Capsule… Achọghị m igwu n'ime ya nke ukwuu, mana ọ na-ada ụda karịa m mgbe niile. M zụtara ọnụ ala mpụga ike diski tupu na-abịa na yiri nnọọ akpaaka-ndabere software, na m nzọ ma ọ bụrụ na m zụtara a ọnyà NAS ngwaọrụ ọ pụrụ ime kpọmkwem otu ihe ahụ. Oge a networked windo nwere ike ịtọ na akpaaka Archive gara aga nsụgharị nke faịlụ na nkwado ndabere na ihe nkesa mbanye maka ndị "oops" oge dị nnọọ ka ha nwere ike na TC (n'ezie… ị pụrụ n'ezie wepụ otu faịlụ nke ya? Oge ikpeazụ Enweela m ahụmịhe ị ga - atụgharịrịrị kọmpụta ahụ niile…) - ọzọkwa, ejirila m ụlọ ọrụ ahụ rụọ ọrụ na igwe ọrụ m mgbe m mechara mehie enweghị nchekasị, ọ bụkwa n'ezie enweghị ntụpọ… pịa na folda a na-ekwu, gaa na “gara aga na nsụgharị” taabụ, na-enwe poke site ruo mgbe onye nwere na-efu faịlụ a hụrụ… mgbe ahụ oyiri kwuru faịlụ n'ime ugbu a mbipute nke nchekwa.
Enyemaka Mbugharị - OK, ị nwere isi ebe ahụ. Ọ ga-amasị m nke ahụ maka kọmpụta nke m (dị ka ọ dị, ọ bụghị n'ezie nnukwu ihe mgbu ijikọ mpụta mpụta, detuo obere akwụkwọ na faịlụ data ndị ọzọ na-ebi na diski dị n'ime gaa na nke ọhụrụ igwe (ma ọ bụ ọbụna tinye ha na obere DVD), wee wụnye mmemme ole na ole m ka na-eji site na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke etinyegoro n'afọ ndị ahụ wee jiri nwayọọ nwayọọ chefuo). Mana nke ahụ ga-adị mkpa karịa onye ọrụ ụlọ ma ọ bụ onye ọ bụla nọ n'ọfịs na-ahazi ahaghị ala karịa ụdị ụdị azụmaahịa ọ bụla nwere netwọkụ yana sava ya, ebe sysadmin ọ bụla bara uru nnu ha ga-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ arụmọrụ. agbanyeghị.
Ọ bụ uru ọ bụla na ndị a na-ewepu onye nchịkwa netwọkụ na ụdị usoro ịdọ aka ná ntị ma ọ bụ nzukọ ọ bụla maka netwọkụ ọrụ gị? Ọgba aghara nke ụdị ahụ na-eduga na nsị, enweghị ikike mgbake ọdachi, enweghị nchebe na ngwa ngwa ngwa, na-enweghị itinye aka na arụpụta ihe ọ bụla.
Sep 13, 2012 na 5:01 PM
Airdrop dị nnọọ iche na folda / faịlụ ịkekọrịta na PC. Nke a chọrọ enweghị netwọk… naanị Mac ọzọ na ntanetị ikuku. Ọ mara ezigbo mma! Oge obula m mere PCharhar na PC, aghaghi m enweta nbanye onye ọrụ na netwọkụ ụlọ ọrụ ma gbakwunye na otu ha tupu m nwee ike ịkekọrịta ihe ọ bụla.
gị na akara efu. Naanị ha na-arụ ọrụ, ọ bụghị ntọala, ogwe njikwa (belụsọ ikikere). Abụ m pc guy maka afọ 20 na mgbe m bụ sys admin na-arụ ọrụ ma na-abịa n'ụlọ na-sys admin maka HW n'ụlọ, ike gwụrụ m. Wepụ ego na macs ma ghara ile anya n'azụ. Agaghịkwa acha anụnụ anụnụ, pinks, ọcha ma ọ bụ oji. Macs na - arụ ọrụ ọ bụla ọ bụla ọ bụla ọchọrọ. Na ọrụ anyị nwetara nhọrọ nke ịtụ Mac ma ọ bụ PC. M wee soro mac, n'ihi na enwere m ike ịme windo mgbe niile n'ime VMware. PC ga - apụ n'ihi na HW jsut chọrọ ka ọ rụọ ọrụ ma ọ nwee BS na CS.
Sep 24, 2012 na 3: 58 AM
Ọfọn, windo na-agba ọsọ na Mac na-agba ọsọ ngwa ngwa, na-ekpo ọkụ ma na-eme ihe ịchọrọ karịa PC. Yabụ na nke ahụ n'uche na ihe Mac nwere ike ime karịa PC, gịnị kpatara na ị gaghị enwe ụwa abụọ na igwe ka mma. Na njedebe ị ga-ahụ na iji akụkụ PC pere mpe.
Apr 25, 2013 na 12: 17 AM
Airplay abụghịkwa nnukwu ihe. My 5 afọ PC mbadamba ike enuba m niile Media center faịlụ m 4 afọ Sony Network Player. Uhere.
Mee 12, 2013 na 12: 22 AM
Kpamkpam ziri ezi.
Mee 23, 2013 na 1: 37 AM
Nke a dị ka 'nwa nwoke nwoke' ọzọ toro eto ruo Apple. Mana enwere ihe ole na ole na-ezighi ezi, dịka ọmụmaatụ, Mac dị mkpụmkpụ maka Macintosh, mana enweghị Macintosh kọmputa ọzọ. A “Mac” bụ PC, ọ bụ otu ngwaike dị nnọọ na a onwunwu ikpe, na-efu 4 ugboro ka ukwuu. Echere m na ihe dị iche ị na-anwa igosi bụ na MacOS (ya bụ, sistemụ arụmọrụ) dị mma karịa Windows maka iji azụmaahịa, mana ị rụtụrụghị ezigbo ihe kpatara MacOS ji dị mma maka onye ọrụ azụmaahịa.
1. airplay chọrọ ka ị zụrụ mmezi ngwaike, na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-adịghị Apple TV Mbido, nke pụtara na ọ bụrụ na ị nweta ihe AirBook ma ọ bụ ihe mgbe ahụ ị ga-enwe ike ikere òkè n'ezie ihe ị na-eme na ihe ọ bụla nnukwu-ihuenyo mgbe ị pụọ na TV raara onwe gị nye. Imirikiti ndị na-eme ihe ngosi anaghị egosiputa ihuenyo gị nke ọma wee daa na 1024 × 768 ihuenyo (nke kachasị mma, na-abụkarị 800 × 600 n'agbanyeghị), nke a na-enye ahụmịhe nlele adịghị mma, ọ na-abụkarị onye ọ bụla na-eso ndị desktọọpụ ha - anaghị m gafee azụmahịa ọ bụla nwere Apple TV ma.
Ọ bụrụ na ịkekọrịta desktọọpụ windo gị, ndị ọrụ ahụ ga-ahapụ gị ka ị jiri 1280, 1440, 1600 ma ọ bụ 1920 enweghị nsogbu - yabụ gịnị kpatara otu ngwaike ahụ agaghị eme nke a, naanị n'ihi na ị na-eji MacOS? Echere m na ajụjụ ahụ zara onwe ya.
2. AirDrop bụ otu ihe ahụ dị ka akpaaka-nchọpụta n'ime Windows na e nwere ebe windo 2000. Igwe ọ bụla na netwọk nke na-ekerịta ihe ọ bụla n'ihu ọha ga-egosi na mpaghara "My Network Places", ịkwesighi ime ihe ọ bụla iji nweta nke a, ọ na-arụ ọrụ! Ọ bụrụ n’ịchọrọ iziga mmadụ ihe, dọrọ ma dobe na folda ahụ, mana ịnwekwara ike ịchọgharị faịlị ha n’otu oge.
Ọ bụrụ na ha ekpochila ikikere (ọtụtụ ndị nchịkwa ga-gbanyụọ nke a na okike ha), mgbe ahụ ha nwere ike ịnye gị ikikere ide ederede Documents ọha na eze na sekọnd ole na ole.
3. Time Machine na-ada ka a rip-anya nke ogologo ọsọ windo akpaka ndabere (ebe mmeri 2000). Ma windo otu ga-echekwa faịlụ sistemụ ahụ naanị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwado faịlụ nkeonwe gị, ị ga-enwe ụzọ iji mee nke a na ngwanrọ sava windo nke onye ọrụ agaghịdị achọ ịma - ọ ga-eme .
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime nkwado data nkeonwe n'agbanyeghị, mgbe ahụ ọ dị mfe ịme nke a na windo dịka ọ ga-eme ya na MacOS, tinye naanị draịva na igwe gị, ma ọ bụ NAS na netwọkụ gị, ha ga-abịa ihe dị mkpa ngwanrọ iji nweta nkwado ndabere gị na-agba ọsọ… Enwekwara ọtụtụ narị igwe ojii nkwado ndabere azịza n'ebe ahụ bụ ndị dị ọnụ ala ma dịkwa mfe iji.
4. Mbugharị Enyemaka na azụmahịa bụ igbu oge, n'ihi na gị "Admin" ga-dị nnọọ wụnye ihe oyiyi na akụrụngwa, na gị onwe gị / ọrụ metụtara faịlụ ga-ama na e nkwado ndabere na mpaghara… Ma ga-abụ dị ka onye ọrụ gị n'agbanyeghị igwe ị banyere. Windows na - eji ndị ọrụ na - agagharị agagharị kemgbe windo 95, nke na - akwado data na netwọkụ gị na - akpaghị aka. Ngwá ọrụ ndị dị ka akpa eji eme ihe iji nye gị ohere idobe faịlụ na mmekọrịta n'etiti usoro offline na ntanetị, nke ahụ dịkwa na Windows 95!
Mee 23, 2013 na 10: 20 AM
Ọ na-egosi dị ka a “na-abụghị onye ofufe nwata” ị ghara tinye n'ọrụ atụmatụ ndị a, @ facebook-100000630323259: disqus. 🙂
1. Ekwuru m na ọ chọrọ $ 99, mana ị kwuru isi m. Kedu ihe kpatara azụmahịa ji emefu puku kwuru puku ndị nyocha karịa ịwụnye ezigbo HDTV na AppleTV? Ọ bụ ya mere m ji kwado ya.
2. Mba, ụjọ tụrụ m na ọdịghị ebe dị nso. Ọ dịghị mkpa ịtọ ikikere, na-na otu Windows netwọk, wdg AirDrop na-enye ohere ọ bụla Macs n'ime gburugburu na jikọọ na otu ikuku ịkọrọ faịlụ.
3. Ọzọ, ọ bụrụ n’ezie ị na-agba software ahụ, ị ​​ga-ahụ ihe dị iche.
4. M na-arụ ọrụ maka ọtụtụ ulo oru na naanị a di na nwunye nwere kwesịrị ekwesị mmekọrịta na-akọrọ netwọk nchekwa ị na-ekwu okwu nke. Ọzọ, nke a na-eme ka Mac ọhụrụ m bụrụ oyiri oyiri, ebe akụrụngwa akwalitegoro n'okpuru ya.
Anaghị m ekwu okwu dị ka onye na-enweghị ahụmịhe abụọ. Enwere m sistemụ anụ ọhịa Windows n'ụlọ XBox 360 maka ntụrụndụ. Ahụmahụ Windows abụghị otu. Atụmatụ Mac na OSX na-arụ ọrụ nke ọma, ọsọ ọsọ na mfe karịa Windows. Abụ m onye ọrụ Windows ihe karịrị afọ iri. Jọ na-atụ m na m gaghị alaghachi azụ. Ndị enyi m na-akparị m banyere ịbụ “nwata nwoke na-anụ ọkụ n’obi” achọpụtawokwa otu ihe ahụ.